विचार – Page5– गाउँपालिका
चिनियाँ राजनीतिबाट नेपालले के सिक्ने ?
स्थिर सरकार, कडा नियम कानुन र तीव्र आर्थिक विकासको पर्याय बनेर संसारलाई आफूतिर आकषिर्त गरिरहेको शक्तिराष्ट्र चीन अबका केही वर्षमा आफूलाई महाशक्तिराष्ट्रको उपाधि ग्रहणको लक्ष्यमा पुर्‍याउँदैछ । सही राजनीतिले नेतृत्वसँगै मुलुकको निर्माणमा योगदान गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण संसारलाई दिन सकेको चीनबाट राजनीतिक रुपमा के सिक्ने ? अब नेपालले चीनबाट सिक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सधैं पश्चिमा शक्तिराष्ट्र...
सन्दर्भ जनजाति महासंघको नवौं महाधिवेशन
यतिबेला आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदैछ । महासंघको ४६ औ सङ्घीय परिषद्को बैठकले नवौं महाधिवेशनको लागि आगामी मंसीर ११, १२ र १३ गते गर्ने भनि मिति तोक्यो । महासंघको च. नं. ३८÷२०७३।०५।३० को प्राप्त इमेल पत्रबाट तिथि नजिकिएको सङ्केत मिलेको हो । तर पत्रमा महाधिवेशन स्थलको सम्बन्धमा अझैं आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन । यसले फेरि पनि...
राजीनामा कै हालतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
मंगलबार, मंसिर ०७, २०७३
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ? राजनीति सम्भावनाको खेल हो र झन तरल नेपाली राजनीतिमा अनपेक्षित घटना बग्रेल्ती हुने गरेका छन् । केही अवस्था यस्ता हुनसक्छन् जसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबार छाड्नुपर्ने परिस्थितिमा पु¥याउन सक्छ । राजीनामाको परिवन्द निर्माण गर्नसक्ने पहिलो प्रकरण संविधान संशोधन र दोस्रो प्रकरण महाभियोग हुनसक्छ । भविष्यमा अन्य अनेक प्रकरण आउलान्, त्यो...
सम्भव छ नयाँशक्ति र फोरम नेपालबीच एकता ?
राजेश विद्रोही केही दिनदेखि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमबीच एकताको चर्चा चलिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण दुवै दलमा रहेको नजिकको राजनीतिक आस्था, विचार र सही राजनीतिक दृटिकोण हुन् । मुलुकको भौगोलिक अवस्था र व्यावहारिक कारण उत्तर चीनको भन्दा दक्षिण भारतसँगको सम्बन्ध सयौं गुणा नजिक र बलियो देखिन्छ । यो नेपालको बाध्यता र आवश्यकता दुवै हुन् । भारतस...
राप्रपा एकताको अर्थ र चुनौती
अर्जुन खड्का २०४७ साल जेठ १५ गते। एकै दिन एकै नामले खुलेका थिए दुई राप्रपा। राप्रपा थापा र राप्रपा चन्द नामाकरण गरियो। निर्वाचन आयोगमा एकै दिन दुइटा खुल्नु नै अशुभ मान्छन् राप्रपाजनहरु। त्यसैले पछिल्लो २६ बर्षमा धेरै समय दुई वा सोभन्दा बढी राप्रपा भए। एउटा पार्टी हुँदा पनि एउटै मुटु हुन सकेन। धेरै ढुकढुकी भए। अहिले फेरि राप्रपा एक भएका छन्। स्थापना एकै दिन, एकै नाम तर दुई पार्टी। अहिले ए...